Swift, ny fiteny fandaharana amin'ny ho avy | Avy amin'ny mac aho
Satria i Swift dia mihevitra ny fahitana for fandaharana
Vao haingana i Apple no nanamafy ny fikasany hanao Swift 2.0 omena ho an'ny mpamorona ho loharano misokatra amin'ny faran'ity taona ity, hetsika izay nantsoin'ny maro ho mahafinaritra, na dia ny be fanantenana indrindra aza dia nahita azy io ho "tsangambato" amin'ny fivoaran'ny sehatry ny programa.
Raha ianao dia iray amin'ireo clueless vitsy izay mbola tsy mahalala hoe inona ilay Swift, dia ny fivoarana nohazavain'i Apple mba hanambatra ny tsara indrindra amin'ny fiteny fandaharana toy ny Tanjona C sy Kakao, mamela ny mpamorona hamorona rindranasa ho an'ny OS X sy iOS ity. Rehefa mandeha ny fotoana dia azo inoana fa tena hanolo ny Tanjona C satria mazava fa kely kokoa ny fotoana fampandrosoana.
Ny drafitra Apple hanovana azy ho loharano misokatra ho an'ny OS X, iOS, ary Linux ampidiro ny mpamorona Swift sy ny tranomboky mahazatra ary voamarina izany:
Noheverinay fa hahagaga raha misy amin'ny Swipo amin'ny sehatra tianao indrindra
Araka ny lazain'i StackOverflow, Swift no fiteny nitombo indrindra tamin'ny 2015 ary iray amin'ireo naoty avo indrindra navoakan'ny mpamorona. Fampiharana marobe toa ny Vine, LinkedIn, Slack… mampiasa Swift. Na ny mpamorona an'i Lyft aza, rindranasa iray izay naverina nosoratana manontolo tamin'ny Swift, dia nilaza fa afaka nanao toy izany ihany koa tamin'ny ampahadimin'ny isan'ny kaody toy ny tamin'ny kinova teo aloha, ankoatry ny fiheverana fa hisy fanavaozana ihany koa kely kokoa ny fotoana.
Ho an'ny ampahany, ny tondro Tiobe dia manondro fa izy dia iray amin'ireo Fiteny 15 malaza indrindra amin'ny Internet, ankoatry ny fahazoana hevitra tena tsara avy amin'ny famoahana samihafa. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika mieritreritra fa tena azo atao tokoa fa rehefa mandroso haingana i Swift dia afaka mahita azy ho fitaovana amin'ny fampandrosoana ny rindranasa Windows.
Misy aza ny firesahana ny amin'ny fivoarana amin'ny Android miaraka amin'i Swift ... Adala? Heveriko fa tsia, satria raha hajaina izany dia afaka omeo hery i Apple. Craig Federighi dia efa nilaza izany tao amin'ny WWDC 2015:
Mino izahay fa ny Swift dia hisolo tena dingana lehibe amin'ny fiteny fandaharana […] Hamorona rindranasa sy rafi-pandaharana mandritra ny 20 taona ho avy izahay ary mieritreritra fa ny Swift dia tokony ho aiza na aiza ary hampiasain'ny rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Satria i Swift dia mihevitra ny fahitana for fandaharana
Ny PHP manaraka ho an'ny rindranasa finday.
Mandresy i Macníficos amin'ny tolotra zoma mainty nataony